विदेश जाने महिला अझै शोषित छन्ः बिजया राई श्रेष्ठ « Khasokhas Follow @khasokhasmag
तपाईं लामो समय देखि बैदेशिक रोजगारमा गएर फर्किएका महिलाहरुको हितमा कार्यरत हुनुहुन्छ । आफनो परिचय र आवद्ध संघसंस्थाबारे बताइदिनुहोस् न ?
तपाईंलाई संस्था खोल्ने प्रेरणा कसरी मिल्यो ? तपाईं आफैं बैदेशिक रोजगारमा जांदाका तीतो मिठो अनुभव केही छन् कि ?
नेपालमा महिला श्रमिकहरुको अवस्था कस्तो छ अहिले ?
विदेशमा काम गरेर फर्किएका महिलाहरुका लागि तपाईं के कसरी सहयोग गरिरहनु भएको छ ?
एनजिओहरुको काम त कमाई र आफनो स्वार्थपूर्ति गर्ने मात्र छ भन्ने आरोप छ नि ?
राज्यले त्यस्ता महिलाहरुको हित र उत्थानको लागि के पहल गरिरहेको छ ?
विदेशमा खासगरी नेपाली महिला कुन देशमा बढि जाने गर्छन् र त्यो संख्या कति रहेको तथ्यांक छ ?
नेपालमा महिला सशक्तिकरणका कुरा धेरै सुनिन्छ । वास्तवमा त्यो कति सत्य छ ? रोजगारीका लागि नेपालमा नै निर्भर हुने दिन कहिले आउला ?
विदेशमा महिलाहरुले भोग्नु परेका समस्या कस्तो प्रकृतिका छन् ?